७ महिनाको वैदेशिक व्यापार : आयात झीनो अंकले बढ्दा निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि - Arthakoartha.com
काठमाडौं, ४ चैत । चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनामा मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलन देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनले सो अवधिमा आयात झीनो अंकले बढ्दा निर्यातमा भने उल्लेख्य वृद्धि देखाएको छ ।
आवको सात महिनामा कुल वस्तु निर्यात ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ६९ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात २२.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्पm क्रमशः १०.० प्रतिशत र ४.९ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीनतर्पmको निर्यातमा ४७.७ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
वस्तुगत आधारमा सोयाविन तेल, अलैंची, जुटका सामान, पश्मिना, धागो (पोलिष्टर तथा अन्य) लगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने पाम तेल, दाल, जस्तापाता, जुस, तार लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।
आवको सात महिनामा कुल वस्तु आयात ०.०१ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ८०३ अर्ब ६४ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३.६ प्रतिशतले घटेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारतबाट भएको आयात ७.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयातमा क्रमशः १२.४ प्रतिशत र १०.८ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
वस्तुगत आधारमा चामल, कच्चा सोयाविन तेल, एम.एस. बिलेट, सुन, दूरसंचारका उपकरण तथा पार्टपुर्जा लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थ, हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, कच्चा पाम तेल, अन्य मेसिनरी तथा पार्टपुजा, भडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपुर्जा लगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को सात महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ०.७ प्रतिशतले घटी रु.७३३ अर्ब ७३ करोड कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा ५.३ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात–आयात अनुपात ८.७ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ८.१ प्रतिशत रहेको थियो ।
एन आई सी एशिया बैंकद्धारा ‘मिस्ड कल बैंकिङ्ग सेवा’ संचालन
३२ वर्षपछि शुरू हुँदै कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रसारण लाइन
लक्ष्मीनारायन बहुउद्देश्यीय सहकारीद्वारा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना
आईएमई मोटर्सका ग्राहकले सन्राइज बैंकबाट विनाधितो ६० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउने